Umtshato kunye neempawu zeZodiac - Khetha Uphawu
Umtshato kunye neempawu zeZodiac
Uphawu lwakho lwezodiac lunokutyhila ukuba uyathanda ukonwaba emtshatweni. Ubomi bomtshato abufanelanga wonke umntu, kwaye i-Astrology inokukunceda ukuba ufumanise ukuba ungumntu othanda isiko, uzinikele kusapho lwakho okanye kufuneka ulalanise kwaye wenze uhlengahlengiso oluthile kubuntu bakho ukuze wonwabe emtshatweni.
Indoda: Indoda ezelwe ngeLanga e-Aries idla ngokukhawuleza ithatha isigqibo sokutshata. Uthanda ukuba yindoda eyongamileyo kwaye akaze abaleke kuxanduva lwakhe, okanye kwiingxabano ezinokubakho kunye neqabane lakhe. Inqanaba lakhe lamandla libekwe phezulu kwaye lihlala lingenakufikeleleka kwiqabane lakhe, kodwa oku akubonisi ingxaki ukuba akazinyanzeli iimbono zakhe kunye nendlela yakhe yokuphila kwiqabane lakhe. Ukuba uvinjwa indlela yokubonakalisa ubuntu bakhe, eqinisekile malunga nobulili bakhe, uya kuqala ukukhangela ukuzonwabisa ngaphandle kwekhaya.
Umfazi: Umfazi we-Aries uya kuhlala exhasa amabhongo eqabane lakhe, kuba ufuna indoda ephumelelayo ecaleni kwakhe. Ukuba akadibani nomnye, yonke into esemandleni akhe iya kwenziwa ukuyila enye. Lo ngumfazi ongazange alityeshele iqabane lakhe okanye uxanduva lwakhe ekhaya nakubomi bomtshato, kodwa njengomntu odlamkileyo nodlamkileyo, ufuna ukuba nazo zonke kwaye angaze ancame amaphupha akhe. Ukhuthele, ulungelelene kwaye utyekele ekugqabhukeni komona xa iimvakalelo zakhe zokhuseleko kunye nokuzithemba kwakhe zishukunyiswa.
Indoda: Xa indoda yaseTaurus itshata kwaye iqala intsapho, idla ngokuzinikezela kumfazi nabantwana bayo, kwaye iya kuhlala izama ukubonelela ngezona meko zilungileyo zokuphila kwintsapho yakhe. Unobulali kwaye unobubele, kwaye ubeka ingqalelo yakhe kulonwabo lomzimba ebomini. Uya kupheka, yaye ukuba kuyafuneka acoceke, anyamekele, aze anyamekele wonk’ ubani osendlwini yakhe, okoko nje oku kungaphazamisi iimbono zakhe zesithethe kunye neemfuno zakhe zokuzingca ekufuneka zihlangatyezwane nenxalenye ethile yosuku ngalunye. Njengomqondiso omiselweyo, unokuzinikela ngokwenene kwiqabane elinye aze ahlale kumtshato owanelisayo kangangeminyaka.
Umfazi: Ibhinqa laseTaurus lihlala libhidekile kumfazi omkhulu wekhaya opheka kwaye abhake imini yonke kwaye uphila ubomi obungenasiphelo ekhaya. Ungumama obathandayo abantwana bakhe, kuyinyaniso oko, kodwa uthando lwakhe ngolwaneliseko lwezinto eziphathekayo ludla ngokuba lukhulu kunemfuneko yokuphumeza indima yakhe yokuhlala ekhaya. Ufuna umyeni ophumelelayo, oya kubonelela ngokhuseleko lwemali kwintsapho yabo, kodwa akoyiki ukuyidala yedwa. Xa ekunye neqabane elifanelekileyo, uthembekile, uthembekile kwaye uzinikele, unomonde owaneleyo wokuhambisa iintaba, ukuba yiloo nto ifunwa yintsapho yakhe.
Indoda: Ukuba ukhangele indoda ezinzileyo yentsapho, umboneleli kunye nemveli, ngoko indoda yeGemini ayiloqabane lakho elifanelekileyo lomtshato. Ubomi kunye naye bunokuba buhle, bunomdla, bunomdla kwaye ngexesha elifanayo bukhululekile, kodwa kuphela ukuba unomlingani ongayi kumsinda. Ngembuyekezo, uya kubonelela ikhaya lakhe ngenkululeko epheleleyo yokucinga kunye nesenzo kwaye afundise wonke umntu ahlala nayo yonke into ayaziyo. Uyasebenza kakhulu, kwaye uya kuthathela ingqalelo imisebenzi yakhe yemihla ngemihla ngokulula nangamandla, kodwa unomtsalane kwaye uyakuthanda ukudlala ngothando kwaye oku akunakuqondwa lula ngamanye amaqabane emveli.
Umfazi: Umfazi we-Gemini ukhohlakele, kodwa ukulungele ukutshintsha abe ngumntu ozolileyo kumawele akhe angaphakathi xa ethatha isigqibo sokutshata, ukuba uthatha isigqibo sokwenza njalo. Uzakuncamathela ngendlela engaqhelekanga kumyeni wakhe xa sele efumene umntu oyifaneleyo ingxaki, kodwa oku akuzukumnqanda ekubeni abeyiloo nto ayiyo okanye agcine ubomi obunempilo bentlalontle obumnceda ukuba oyise nabuphi na ubunzima bobomi. Umfazi weGemini ufuna iqabane elikwinqanaba elifanayo lengqondo njengoko linjalo kwaye akufanele lizinze ngaphantsi.
Indoda: Indoda ezelwe ngeLanga kwisibonakaliso seCancer ifumana ubomi bentsapho njengento ebaluleke kakhulu ebomini. Uguqukele kumaxabiso emveli, ithenda, uzinikele kwaye unenkathalo, kodwa unenkathazo yokubonakalisa inyathelo lokuqala nokuba ngumkhuseli ebesoloko efuna ukuba nguye. Nangona esenokubonakala eliqabane elifanelekileyo, ubomi kunye naye abukho lula. Engenzi nto yaye maxa wambi enovelwano olugqithiseleyo, unokuguqukela ekuthetheni ngamazwi ngokukhawuleza, kuba uethe-ethe ukuya kutsho embindini. Ufuna umntu oza kumomeleza aze ambonise ukuba unamandla nokuzithemba kangakanani.
Inkosikazi: Umfazi woMhlaza ngoyena mfazi ufanelekileyo kwiqabane elibambelele kwizithethe zemveli. Unobubele kwaye uthembekile, ungumama, kwaye uzele luthando nokuqonda. Ufuna umntu omkhuselayo, kungekhona ngenxa yokuba ebuthathaka, kodwa ngenxa yokuba efuna iqabane anokuthembela kulo ukuze amgcine ekhuselekile xa esengozini. Emva kokuba etshatile, uya kwenza konke okusemandleni akhe ukukhulisa ulwalamano alukhethileyo kwaye ahlale ekupha, ubomi bomtshato obuphilileyo de bahlulwe kukufa.
Indoda: Indoda ezelwe ngeLanga kuLeo iqinisekile, ishushu kwaye ihlala ikhanyisa wonke umntu ojikelezileyo ngentliziyo yakhe enkulu. Lo ngumqondiso olawulwa yiLanga kwaye ngokulula uba ngumbindi wokuqwalasela wonke umntu ojikelezileyo, ngamanye amaxesha enze kube nzima ukuba iqabane lakhe likhanye. Njengomntwana omkhulu ngokwakhe, ungumzekelo odlalayo kunye noyise ohleka ngokulula, oxhasayo kunye nokunxibelelana nabantwana bakhe, ngaphandle kokuba ubabeka emthunzini wakhe. Umboniso awunguye, udinga iqabane elibukeka lilungile, elithandekayo nelihle, kwaye lihamba kakuhle nobuntu bakhe. Udinga umntu oya kuhlala emphatha ngentlonipho kunye nokuncoma, kwaye ulindele okufanayo ngembuyekezo.
Inkosikazi: Umfazi we-Leo uhlelekile, ufika ngexesha kwaye uhlala efumana ixesha layo yonke into. Unokuba ngumfazi ofanelekileyo kwindoda enamabhongo ukuba iyithanda ngokunzulu ngokwaneleyo, kuba inamandla kwaye iyayiqonda into ekufuneka yenziwe ukuze iphumelele. Lo ngumfazi onamandla, onomtsalane, onenkanuko, oshushu kwaye ngamanye amaxesha uyangxola. Izigqibo zakhe zezakhe kwaye ufuna ukuhlonelwa ngalo lonke ixesha, naxa wayekhuliswe ngokwesithethe okanye wayehlala kwindawo yoosolusapho. Xa ethatha isigqibo sokuba ufuna ukuchitha ubomi bakhe nomntu, akafane akhulule kwaye angahloneli ukhetho lwakhe, abe nesibindi ngokwaneleyo sokujongana nayo nantoni na ezayo kuye.
Indoda: Indoda ezelwe kumqondiso weVirgo yenye yamadoda athembekileyo kwizodiac. Udla ngokuba nengqiqo kwaye ucocekile, uyakuthanda ukusebenza nzima nokondla intsapho yakhe. Akanikezeli kubuntu bakhe ngokulula, kodwa amaxesha amaninzi akabonakalisi umdla, ukuba ngoonqabisekileyo kwaye akukho nto ingako yokuthandana. Njengomnye weempawu eziguquguqukayo, uyatshintsha kwaye ufuna iqabane ukugcina ubudlelwane babo buzinzile. Uyakuthanda ukuhamba, azive enemveliso kwaye ekrelekrele, kwaye uya kukhonza lowo amthandayo ngokuzinikela okoko nje ubudlelwane babo bunentsingiselo kwaye buzaliswe kukuthembana.
Inkosikazi: Umfazi weVirgo uhlalutya kwaye ukrelekrele, ngelixa kwangaxeshanye ungumfazi onomdla kakhulu kunye nenkathalo kunye nomama. Nangona ehlala enengxaki yokuyeka imfuno yakhe yokugcina yonke into iphantsi kolawulo, oku kunokoyiswa kunye neqabane elinoxanduva ngokufanelekileyo. Usenokubonakala ebanda kwaye esengqiqweni kakhulu kubudlelwane obunothando, kodwa ukwathembeke ngendlela engakholelekiyo, esebenzayo kwaye ekulungele ukuzincama ngenxa yokulungelwa okukhulu. Ekubeni olu luphawu lokuwa kukaVenus, unokuba neengxaki zokuqonda ukuba uxabiseke kangakanani kwaye ubeke ulonwabo lomzimba kunye neemvakalelo zakhe ngasemva.
Indoda: I-Libra ngumqondiso omele umtshato kunye nobudlelwane ngokubanzi, kwaye indoda ezelwe kulo mqondiso ivakalelwa kukuba 'umxhuzulane womtshato', uhlala efuna uthando kunye nomntu onokubelana naye ngobomi bakhe. Ngenxa yokuba iLanga lakhe liwile, ukuzithemba kwakhe kuhlala kushukunyiswa kwaye umfanekiso wakhe uhlala usekelwe kwizimvo zabanye abantu. Le yindoda ekhetha amaqabane azithembileyo ahambelana nembonakalo yawo yonke kodwa ayikhathali kakhulu ngentlebendwane kunye nokuba bathini abanye. Unomdla kwaye njengomntu ocinga ngabanye uhlala engumthandi obalaseleyo. Noko ke, ukunganeliseki kuya kumtyhalela ngokulula ekubeni angathembeki.
Umfazi: Umfazi waseLibra unomtsalane kakhulu kwaye ungowasetyhini, uhlala engqongwe ngabantu abathandanayo kwaye engoyiki ukubonisa ubuni bakhe ngokukhupha oko kukhanya okuhendayo, okuhlala kungavunyelwa ngabanye abafazi. Ujonga imvisiswano kunye nokulinganisela kubudlelwane bakhe, kwaye ufuna indoda eyomeleleyo, enoxanduva kwaye ekhuselayo, kodwa ayixhonywanga kwizimvo zabanye abantu. Abasetyhini abaninzi abazalelwe kulo mqondiso bafuna ukunandipha ubunewunewu kunye nentuthuzelo, kodwa musa ukukhetha iqabane labo ngokusekelwe kwizinto eziphathekayo zobudlelwane kunye nabo. Udinga uvuselelo lobukrelekrele kunye nomntu onokwenza ubomi bakhe bube mnandi kwaye bube mnandi ngelixa engafaki emngciphekweni ukhuseleko lwakhe.
Indoda: Indoda yeScorpio idla ngokuchazwa njengonenkosi kakhulu kwaye inomona. Inyaniso yile nto aba yiyo ngenxa yobuntununtunu bakhe obunzulu kunye noloyiko lokwenzakala. Xa ekhetha iqabane lobomi bakhe bonke, uya kwenza konke okusemandleni akhe ukuze athethelele isigqibo sakhe, kwanokuba sasingenakuba sesona silungileyo. Unokuba mnyama kwaye aswele, agxininise kwaye abe nzima, kodwa ngokwenene ayikho enye indoda ekwazi ukuzinikela okunjalo xa kuziwa kuthando. Ukufumana ulonwabo kunye naye, uthando kufuneka lubonakaliswe rhoqo kwaye ukongamela kunye nezimo zengqondo zobuxoki kufuneka zibekwe ecaleni.
Umfazi: Ibhinqa elizalwe ngeLanga eScorpio lithatha umtshato njengento ebaluleke kakhulu kwaye likhangele iqabane elinomdla, onamandla kunye namandla. Uya kuzincama yena kunye nexesha lakhe elidlulileyo ngenxa yolonwabo lwentsapho yakhe, kodwa ngokubuyisela, ulindele ukunconywa kunye nentlonipho epheleleyo. Unomdla kakhulu kwaye ugcwele amandla, lo ngumfazi ofumana undoqo weqabane lakhe kwaye ubambelele kuwo ixesha elide njengoko anako. Le kuphela kwendlela aya kuziva uthando kwaye akasoze azinze kubudlelwane obuphezulu. Ukuba indoda iyasilela ukuzalisekisa iimfuno zayo ezisisiseko, iya kwenza ijika, ihambe, kwaye ingaze izisole ngesigqibo sayo.
Indoda: Indoda ye-Sagittarius ingumntu ozelwe, uhlala elungele ukutsiba ukholo, nangona kwakungekho siseko sokwenza oko kwasekuqaleni. Uya kuphulukana lula nombono wokwenyani, athande kwaye enze iqabane lakhe, ekhokelela ekunganeliseki okungenakuphepheka kunye nokuphoxeka. Xa ekhetha iqabane elikwaziyo ukumnika inkululeko eyaneleyo, ngelixa elifanayo ukwabelana ngeengcamango zakhe kunye neenkolelo zakhe, unokuhlala kumtshato ophilileyo ixesha elide kakhulu. Ufuna iqabane eliciko, elimnandi, elizimeleyo nelikwaziyo ukumelana nalo ngaphandle kwakhe.
Umfazi: Umfazi weSagittarius ngumfazi osisilumko, ovulelekileyo kunye nonobubele. Isethi yakhe yeenkolelo inika amandla okuxhasa iqabane lakhe kuyo nayiphi na into abayibeka kuyo ingqondo, kodwa kuphela xa ekhetha umntu omenza ahleke, athembeke kwaye anike njengoko enjalo. UMonotony lolona tshaba lwakhe lubi kwaye uya kwenza nantoni na ukugcina umlilo uvutha emtshatweni wakhe, kubandakanywa ukulwa ngamaxesha athile okanye ukudlala ngothando nje ukuze aqhole izinto kunye nokunyusa uxinzelelo lwezesondo. Ukuba ufumana iqabane elizimisele ukumvumela ukuba agcine inkululeko yakhe, injongo yolu lwalamano iya kucaca kuye kwaye ekugqibeleni uya kuthotywa.
Indoda: Indoda ezelwe kunye neLanga eCapricorn idla ngokuzinikela kwiinjongo zakhe zomsebenzi, kwaye ihlala ingena emtshatweni emva kweminye imiqondiso, xa iqinisekile ukuba ihambelana neyona nto iphambili kwizinto eziphambili kunye nezicwangciso zobomi. Iqabane lakhe liya kuziva likhuselekile, likhuselekile kwaye likhuselekile kulo mtshato, kodwa lihlala lingenazo iimvakalelo zothando. Undoqo wendoda yaseCapricorn inobuntununtunu kwaye ishushu, kodwa ubume bayo ayisiyiyo loo nto imnandi kunye neemvakalelo kubomi bemihla ngemihla. Unokuba nzima ukunxibelelana naye, engqongqo kwaye eqinile kwiimbono zakhe, ngoko ufuna iqabane elinothando oluninzi kunye nobuchule bokufumana ulungelelwaniso phakathi kwabo.
Inkosikazi: Umfazi weCapricorn udalelwe iqabane elihloniphayo ukuzimela kwakhe, ingqiqo kunye nemvelo ye-feisty, ngelixa kwangaxeshanye ekwazi ngokugqibeleleyo ukudala ubomi bentsapho obunokuthula ngaphandle kolonwabo olukhulu. Unokuba nenkani kwaye aqhubeke ukuya kwinqanaba lentlungu, kodwa uya kuhlala ethatha icala labathandekayo bakhe kwaye athembeke njengaye nabani na. Ukuba wenzakala kaninzi, lo mfazi unokubanda, agcinelwe, abe kude kwaye ade acekiseke, aphulukane nawo nawuphi na umnqweno wokubonisa imvakalelo nokuba ulikhathalele ngokwenene iqabane lakhe. Akuthathi nto ingako ukumophula intliziyo kwaye udinga umntu othambileyo, okwaziyo ukuyiqonda le nto.
Indoda: Indoda yaseAquarius ayiqikeleleki kakhulu kwaye ihlala ithi ayifanelekanga emtshatweni. Inyaniso kukuba akalikhathalelanga iziko lomtshato kakhulu ukuqala, kwaye uhlala ecekiswa ngumbono wokuzibophelela kunye nokubotshwa ngumthetho. Okhethiweyo wakhe kufuneka athembeke kwaye afudumale, kodwa ahlale ekulungele ukuthatha imincili emitsha kunye nemingeni ngexesha lomtshato wabo. Le yindoda engenangxaki ne-divorce kwaye isoloko iyigcina engqondweni njengenye yezinketho zayo xa izinto ziba nzima. Unxunguphalo kunye ne-edgy, unokukhawuleza ukungena emtshatweni kwaye aphume kuwo, kwaye kufuneka abe nomntu ozimeleyo, okhululekile kunye nengqondo evulekileyo ukuze ukuzinikela kwakhe kuhlale.
Umfazi: Umfazi ozelwe ngophawu lwe-Aquarius unobungane kwaye uvulekele zonke iintlobo zamava amatsha, kodwa ngokufuthi ubonakala kakhulu ngokulindelekileyo kuluntu, usapho lweqabane lakhe kunye nabamelwane. Akafuni kuzibophelela ade afumane umntu ofanelekileyo anokuhlala naye, kodwa unokwenza ukhetho olungalunganga ngokubeka esichengeni neqabane elingamfanelanga kakhulu nelingamhloniphiyo kwaye limxabisile ngendlela amphatha ngayo. yi. Ukuba uyaqonda ukuba ubomi bakhe buyinto engapheliyo yesiqhelo, imfuno yakhe yeeadventure kunye neenguqu zinokuthatha indawo. Kulapho esiba liqabane elingathembekanga ngenxa yoloyiko olunamandla lokuphila ubomi obuqhelekileyo obukruqulayo kunye nobuqhelekileyo.
Indoda: Indoda yePisces ibophelelekile ukuba ihambe ngokugqithiseleyo xa ifika emtshatweni. Ubume bakhe obunamandla obunqwenelekayo bumnika ukholo olungakholelekiyo eluthandweni, kwaye xa ekule modi, ukulungele ukuzalisekisa yonke iminqweno iqabane lakhe elinalo, esenza ulonwabo kusapho lwakhe luthumo lwakhe lobomi bonke. Iinkolelo zakhe zezona zibalulekileyo kuye kwaye akanakwenza nantoni na ukuzibeka emngciphekweni. Nangona kunjalo, ukuba ukuphoxeka kukhaba kwaye ufumanisa ukuba ukhethe kakubi, unokulahleka, avale, aqhathe okanye alale ngokukhululeka okumangalisayo, abe yindoda ebonakala ngathi yenza konke okusemandleni akhe ukuba ashiywe ngumlingane wakhe. Udinga umntu onengqondo kwaye osekelwe ukuze amgcine ekwimo yokulungelelana ngamaxesha onke.
Umfazi: Umfazi ozalwe ngeLanga kwiiPisces uthandana nothando, kwaye ukholelwa ngokwenene ukuba umtshato uya kuzisa imimangaliso ebomini bakhe. Akanakuwuncama umtshato kwanokuba amava akhe ebebuhlungu, ekholelwa ngokuqinileyo kwisiphumo esilunge ngakumbi kwixesha elizayo. Iqabane lakhe kufuneka liqonde isidingo sakhe sobumfihlo kwaye lihloniphe iindlela zakhe zokufikelela kubudlelwane obusondeleyo, kunye nokwabelana ngehlabathi lakhe langaphakathi kunye nelo langaphandle. Indawo yakhe kufuneka icoceke kwaye imida yakhe ihlonitshwe, ukuze azise umlingo ekhayeni lakhe kwaye abeke lonke ukholo kunye nentembelo yakhe kwikamva losapho lwakhe.
Ngena Khetha Uphawu Itaurus Capricorn Umhlaza